U-Edson Glauber-Thandaza ngokunyanisekileyo-ukubala ubukumkani
Inenekazi lethu ukuze	Edson Glauber NgoSeptemba 29, 2020:
Ngo-4: 00 ntambama, uMama oBusisiweyo wabuya kwakhona evela ezulwini, ngexesha lokuvela kwakhe emva kwemini. Wayephethe umntwana onguYesu ezingalweni zakhe kwaye bobabini beza behamba no-St Michael, St Gabriel no-St Raphael. Usinike omnye umyalezo:
Luxolo bantwana bam abathandekayo, uxolo!
Bantwana bam, mna noMama wenu andidinwa, kwaye ndiyakumema emthandazweni nasekuguqukeni. Zinikele kuThixo nakubukumkani bamazulu, kuba nguye yedwa onokukunika usindiso kunye nobomi obungunaphakade. Thobela ubizo lweNkosi; yibani ngamadoda nabafazi abathandaza ngakumbi nangakumbi ukuze babuyisele izono zehlabathi. Vuka. Guqula ubomi bakho, umamele iminxeba yam, kuba kusenokwenzeka ukuba kamva ungabinalo ubabalo kunye nethuba uThixo akunika lona ngoku.
Thatha iiRosari zakho uthandaze ngamandla, kuba abo bathandazayo baya kuyazi indlela yokunyamezela ixesha lezilingo ezoyikekayo ngaphandle kokonganyelwa kwaye ngaphandle kokuphulukana nokholo.
Kholwani, bantwana bam, eluthandweni lukaThixo, kuba uthando lwakhe lunokusindisa umhlaba kububi obukhulu kwaye bunokuguqula ubomi benu. Thandaza, thandaza, thandaza, kuba iintlungu neentshutshiso ziza kufika kwakamsinya, kwaye baya konwaba bonke abo bahlala behleli elubabalweni lukaThixo. Guqula ubomi bakho ubuyele kuThixo.
Ndiyanisikelela nonke: egameni loYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele. Amen!
Umama Obusisiweyo wandivusa ngo-03: 00 kwaye wathetha nam kwade kwango-05: 30. Ndeva ilizwi lakhe landixelela lo myalezo kunye nezinye izinto zobuqu endingenakubhala ngazo, ezinxulumene nomsebenzi wakhe, malunga nabantu abenza emfihlakalweni, endimele ndilumke ngaye, nangokupheliswa kwehlabathi. Njengomama onothando nokhathalayo, undiyalele kwaye wandicela ukuba ndidlulise umyalezo wakhe kubantu abakhoyo kule Ngcwele.
Nyana wam, ndivela ezulwini ukuza kukunika intsikelelo yam. Ndivela ezulwini ndize ukuxelela umhlaba wonke ukuba uThixo ukhona kwaye akasathandwa, akanqulwa okanye ahlonitshwe.
INkosi isandula ukufumana izithuko kunye nezikhubekiso, kwaye bambalwa abo bazinikelayo [kuye] kwaye benze iinzame zokumnika ubulungisa nembuyekezo efanelekileyo. Abantu abaninzi benza ukuthanda kwabo kunokuba benze ukuthanda kweNkosi. Abakaguquki kwaye bakude nendlela yoSindiso.
Abo batyelela indawo yam yokubonakala ngaphandle komoya wokuthandaza kwaye ngaphandle komnqweno wokuguqulwa abanako ukufumana iintsikelelo zezulu okanye ubabalo, njengoko besenza njengabahanahanisi phambi kweNkosi. Bafuna iintsikelelo kunye noncedo lukaThixo, kodwa abenzi mzamo mncinci wokulungisa iimpazamo nezono zabo. Ngaphandle koguquko akukho lusindiso. Ngaphandle kotshintsho lobomi kwaye ngaphandle kwenguquko enyanisekileyo yezono zakho, ushiye ngasemva zonke izinto eziphosakeleyo kunye nobomi besono, ngekhe ubufanele ubukumkani bamazulu.
Ngoku ndibuza omnye wabantwana bam abalapha, elowo nalowo ngokwakhe: nize ntoni apha? Ngaba ukhe weza wangena kwiNgcwele yeNkosi njengomntwana wokwenene kaThixo okanye njengomntwana wehlabathi ulandela indlela yentshabalalo ekhokelela emlilweni wesihogo? Ngaba ungene kwiNgcweliso yeNkosi ukuba uguquke ngokwenyani, okanye usalandela ingcebiso yabangendawo, uhamba ngendlela yaboni kwaye uqokelele nabagxeki?INdumiso 1: 1
Khumbula: abakhohlakeleyo banjengomququ ophetshethwa ngumoya, abasayi kusinda emgwebeni, naboni abanakubakho ebandleni lamalungisa.INdumiso 1: 4-5
Nkosi, ngubani na oya kungena engcweleni yakho? Ngubani onokuhlala kwintaba yakho eNgcwele? Abo bathe tye kwihambo yabo, abenza ubulungisa nabathetha inyaniso ngokusuka entliziyweni, abangasebenzisi ulwimi lwabo ukunyelisa, abenzakalisi abanye abantu kwaye abanyelisi abamelwane babo.INdumiso 15: 1-3
Zonke iindlela zikaYehova luthando nenyaniso kwabo babambe umnqophiso wakhe nobungqina bakhe.
Ukuguquka kuthetha ukushiya zonke izinto eziphosakeleyo ngonaphakade ngenxa yothando ngoThixo kwaye ungajongi emva kubomi beempazamo kunye nezono ezilahliweyo ukuze ulandele ekhondweni lakhe.
UYesu Kristu ukwanguye izolo, nanamhlanje, nangonaphakade.KumaHebhere 13: 8Ndikunye noNyana wam uYesu Krestu, emanyene nothando lwakhe, yonke into iya kuhlala ikho. Ngaphandle kwakhe, uya kuthwalelwa ziintlobo ngeentlobo zeemfundiso ezingaqhelekanga,Efese 4: 14 kuba nabani na ongenantliziyo iqiniswe lubabalo soze abenamandla okumelana nobubi kwaye uyakuhlala ewela esonweni ashiye inyani, aphile ngokuxoka nakubomi bokukhanyela uThixo.
Ndikubizela kuThixo. Guqula ngaphandle kokulibazisa. Ndiyakusikelela, nyana wam, kwaye ndikunika uxolo lwam!
Bantwana bam, eli ayiloxesha lamathandabuzo nokungaqiniseki, kodwa lixesha lokuba nizinikele kuThixo, niguqule iintliziyo zenu eluthandweni lwakhe niphile ubomi benu bokuzinikela nobungcwele. Sele ndininike imiqondiso emininzi: ngoku yibani ngabantwana bomthandazo nokholo kwaye nibe ngumzekelo wokuba ngabam ngokupheleleyo.
Yibani yimiphefumlo eyi-Eucharistic yokwenene ukuze nibe ngabantwana bam abamanyeneyo kwintliziyo yam engafezekanga. Okukhona unqula uNyana wam kwi-Eucharistic Sakramente, kokukhona uMoya oyiNgcwele uya kumanyana nawe kwaye akukhanyisele, akubonise indlela eya phambili nento omele uyenze.
Nyana wam, kwakhona izulu lize kuthetha nawe; Kwakhona uThixo uyakuvumela ukuba udibane neZulu ukuze ufumane uthando, uxolo, iintsikelelo kunye nobabalo. Kwezi ntlanganiso, akukho ngqondo yomntu inokubuqonda ububele beNkosi nobukhulu bayo.
UThixo uthetha nam ngam: UThixo ubiza wena nabo bonke abantu ekuguqukeni. UThixo unqwenela ubungcwele babo bonke abantwana bakhe, ukuze baphile ubomi bokuguquka kunye nokuguquka ngokunyanisekileyo ngaphambi kokuba ifike imini eyoyikekayo yobulungisa bakhe, eya kubohlwaya zonke izono nazo zonke izenzo ezenziwe ngokuchasene nentando yakhe yobuthixo.
Akukho nto iya kusinda kumgwebo wakhe wobuthixo.
Thandaza, nyana wam, thandazela abo bamshiyileyo uThixo nendlela yakhe engcwele. Thandazela abo bangasafuniyo ukwazi ngezulu, kodwa baphile phithi kukuzingca lihlabathi, ngovuyo lwalo olungelulo nolonwabo olungasindisi nto ngaphandle kokukhokelela emlilweni wesihogo.
USathana utshabalalisa imiphefumlo emininzi ngesono; uninzi lwazo lubanjiswe yimigibe yakhe yesihogo kwaye alunamandla okuphuma ekubambeni kwakhe. Thandaza uzincame ngenxa yokuguquka kwaboni, ukuze imiphefumlo emininzi iguquke kwizono zayo, icele uxolo kuThixo kwaye ibuyele kwindlela elungileyo.
Imiphefumlo ixabisekile kuThixo nakum, uMama wakhe waseZulwini. Basindise ngemithandazo yakho, ngamadini kunye nezohlwayo, ubanceda ukuba bafumane indlela engcwele yezulu ekhokelela kwintliziyo yoNyana wam uYesu.
Ndisecaleni lakho ukunika uthando lwam kunye noncedo lwam oomama. Ndiyakuthanda kwaye ndikunika uthando lwam, ukuze uluhambise kubo bonke abantwana bam abayifunayo: egameni loYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele. Amen.
INdumiso 1: 1
INdumiso 1: 4-5
INdumiso 15: 1-3
KumaHebhere 13: 8
Efese 4: 14
← Ukuza okuzayo kweMelika
Pedro Regis - Suku… →